Kutheni le nto ndiza kuba namabala kuphela kwicala lasekunene lobuso bam? - Amabala
Njani Tos, Projects And Rooms
Kutheni le nto ndiza kuba namabala kuphela kwicala lasekunene lobuso bam?
Amabalangumba ochaphazela abantwana abakwishumi elivisayo, ulutsha kunye nabantu abadala. Ngokwe- Isikolo saseMelika seDermatology , kuqikelelwa ukuba ngama-50 ezigidi zabantu eUnited States kuphela ngoku abaphila nale meko yolusu. Zininzi izizathu induna inokwenzeka , kwaye zininzi ezichaza ukuba kutheni inokubonisa kuphela kwicala lasekunene lobuso.
Izizathu ezinokubakho zamachaphaza amachaphaza asekunene
Amabala angabangelwa lutshintsho lwehomoni (ukufikisakumakhwenkwe namantombazana, ukukhulelwa, okanye ukusebenzisa izinto zokucwangcisa ngomlomo), amayeza athile, uxinzelelo, ukutya okungalunganga, okanye ufuzo. Kubonakala kwiindawo zomzimba ezinamanqanaba aphezulu e- amadlala sebaceous . Kukho amaxesha apho kuphela icala lasekunene lobuso eliya kubonisa iimpawu zamabala. Isitshixo kukufumanisa ukuba kutheni isenzeka kwaye kwenziwe utshintsho olufunekayo.
Izifo zeentlanzi zika-Oscar
Ukuphilisa amaqokobhe ebusweni bakho
Ukulala kwicala lasekunene lobuso bakho
Imeko yendalo esingqongileyo idlala indima enkulu kwimbonakalo kunye nobukhali bamabala. Imikhwa ethile inokubangela ukucaphuka okungafunekiyo kolusu. Ngaphandle kokuba zamkelwe kwaye ziguqulwe, amabala akunakulindeleka ukuba ahambe. Thatha indlela olala ngayo njengomzekelo. Ukulala nesidlele sakho sasekunene kumqamelo kunokubangela induna esecaleni. Iipillowcase zixhomekeke kumdaka nakwioyile, ekhokelela kwi umatshini wamabala . (Amachaphaza amnyama abangelwa zizinto okanye izinto ezichukumisa ubuso bakho.) Xa ulalisa intloko yakho kwipillowcase engcolileyo, izinto ezingcolisayo ezakhiweyo ziyayivala pores yakho. Oko kukhokelela ekuqabukeni kwamabala ebusweni.
Kukho iindlela ezimbalwa zokuthintela oku kungenzeki. Eyokuqala kukubaHlamba ubuso bakhoubusuku ngabunye ngaphambi kokulala. Oku kuyakugcina i-pillowcase icocekile kangangoko. Okulandelayo kukuhlamba i-pillowcases yakho rhoqo. Bona kufuneka itshintshwe ubuncinci kanye ngeveki kwaye rhoqo rhoqo kwiintsuku ezimbini ukuya kwezintathu. Cinga kwakhona uhlobo lokuhlamba impahla oyisebenzisayo. Izinto zokuthambisa ezenzelwe ulusu olubuthathaka zezona zibalaseleyo njengoko kunqabile ukuba zibangele impendulo.
Ukwenza iifowuni kwifowuni yakho
Esinye isizathu amabala anokuvela kwicala lasekunene lobuso bakho Ukusetyenziswa kweselfowuni . Kule mihla, wonke umntu unenye. Nangona kunjalo, kunqabile ukuba abantu bacingezicoce okanye zibulale iintsholongwaneizixhobo zabo ze-elektroniki. Oku kunokubangela ukwakhiwa kweentsholongwane. Ngalo lonke ixesha ushukumisa isandla somntu okanye uvula ucango (ukulandela kuphela ngombhalo okhawulezayo) usasaza iintsholongwane kwifowuni yakho. Xa usenza umnxeba, loo bhaktheriya iza ngqo ebusweni bakho. Oku kunokucaphukisa ulusu kwaye kubangele ukuphuma.
Ukuba ubamba ifowuni uye kwicala lokukhwela ebusweni bakho, cinga ngokwenza uhlengahlengiso oluncinci. Zama ukusebenzisa i-headphone okanye iseti yentloko xa ufowuna, sebenzisa iisibulali zintsholongwaneukuya coca iselfowuni yakho yonke imihla , kwaye uhlale ubamba ifowuni kude nawe. Ezi zisombululo zilula ziya kuthintela ulusu lwakho ekubeni lungadibani namaqhakuva abangela iintsholongwane.
Ukuchukumisa ubuso bakho ngokungazi
Wonke umntu uchukumisa ubuso bakhe engakhange ayicinge nokuyicinga. Ngelishwa, ukuchukumisa ubuso bakho kunokubangela induna engafunekiyo. Ngokutsho kwesikhumba uDkt Ava Shambon kwinqaku izizathu zokuyeka ukubamba ubuso bakho , Kubonakalisiwe ukuba kubangela ukuqhekeka. Iminwe yakho isasaza iintsholongwane, ivutha ulusu, kwaye yonyusa imveliso yeoyile. Ukungcola kunye neeoyile ozikhethayo kwizenzo zemihla ngemihla, njengokusebenzisa ikhibhodi okanye ukubamba isidlo sasemini, kusezandleni zakho. Xa uchukumisa ubuso bakho, intsholongwane iyadluliselwa kwaye ngaphantsi komphezulu wolusu.
into yokubeka kwithegi yemithwalo
Ngokwe- funda ngobuso obuchukumisayo , Abantu babamba ubuso babo nge-avareji yamaxesha angama-23 ngeyure. Ukuhamba rhoqo kuthetha inqanaba eliphezulu lokudluliselwa kwebhakteriya, kwaye ukuba kukho indawo yobuso bakho ohlala uyichukumisa, akunakuthatha xesha lide ukuba kwenzeke indawo.
Ukuba ubona amabala kwelinye icala lobuso, cinga ngemikhwa yakho. Ukuchukumisa elo cala rhoqo kunokubangela ukuphuma kwamabala. Eyona nto intle ukuyenza kukugcina izandla zakho zingabikho ebusweni. Yenza isigqibo sokuba uyeke. Enye indlela yokumisa thintela ukuthintela ubuso rhoqo ukuzama ukubeka ibhandeji kumnwe wakho wesikhombisi. Oku kuya kusebenza njengesikhumbuzo somzimba. Nje ukuba wahlukane nalo mkhwa, uyakuqaphela ulusu lwakho luqala ukucaca.
Ukutya kakhulu iswekile
Izifundo zophando lwexesha elide zifumene ikhonkco phakathi ukutya okuneswekile eninzi kunye namabala . Ukutya okunesalathiso se-glycemic ephezulu, okanye i-GI, kunokuchaphazela indlela amabala anzima ngayo. Ibangela ukuba amanqanaba ehomoni anyuke, nto leyo eyonyusa imveliso ye-sebum. Oko kuhlala kukhokelela kuqhawulo. Ukutya okuthathwa njenge-GI ephezulu kubandakanya: iziselo ezineswekile, itshokholethi, izinto ezibhakiweyo kunye nesonka esimhlophe.
Oku kunxulumene ne-acne esecaleni ekunene ngenxa yendlela yesiko yamayeza amaTshayina, eyaziwa njenge Imephu yobuso . Umbono kukuba ukubonakala kwangaphandle kwesikhumba kunokubonisa imicimbi yezempilo yangaphakathi. Kukholelwa ukuba isidlele sasekunene sinxulunyaniswa neswekile. Ukuqhekeka ekujoliswe kuko kuloo ndawo kubonisa ukuba kukho iswekile eninzi ekutyeni kwakho. Zama ukunciphisa ukutya okuphezulu kwe-GI kwaye ufake iziqhamo ezintsha, imifuno, kunye neenkozo ezipheleleyo kwizidlo zakho.
Unokulufuna nini unyango
Kukho amaxesha apho kuye kufuneke ukuba ufune unyango olungaphezulu. Ukuba wenze utshintsho kodwa ungaqapheli mahluko kwinkangeleko yesikhumba sakho, yenza idingaugqirha wesikhumba. Baya kumisela elona khondo lilungileyo lokujongana neemfuno zakho. Oko kunokubandakanya ukusetyenziswa kweemveliso zokhathalelo lolusu ezichaziweyo okanye utshintsho oluthe kratya kwindlela yokuphila.
Ikwangumbono olungileyo ukubona ugqirha oqhelekileyo ukuba ulusu lwakho lukhona. Amabala anokuba sisiphumo esibi kwimicimbi yezonyango I-PCOS (okanye iPolycystic Ovary Syndrome) kunye isifo seswekile .
Icala lasekunene lamaBala anokunyangwa
Amachaphaza anokuphazamisa ukujongana nawo. Ihlala ibangela iimvakalelo zokuziva uneentloni, ukungazithembi, kunye nokungabikho koncedo. Ngokwenza utshintsho olunengcinga kwimikhwa nakwindlela yokuziphatha, kunokwenzeka ukuba uphelise amabala asemacaleni.
Used Cars Iiproteni Source For Vegetarians Ukukhulelwa Nokuqeshwa Amakhadi Amagames Iphepha Lokusebenzela Ne Iiprinta
Isikolo Sasekhaya Isiseko
Ikampu Imiboniso Yesilayidi
Ungalifumana njani igazi elomileyo ezingubeni
yimalini oza kuyinikela emngcwabeni
Ithetha ntoni tattoo yongqatyana
indlela yokwenza i-corsage yesihlahla usebenzisa i-wristlet
Ngaba iikati zingasela ubisi olungena simahla kwilactose